InsideSales: Isgaarsiinta, Gamify, Saadaalinta iyo Muuqaalka Iibinta
Khamiista, Oktoobar 31, 2013 Isniin, Oktoobar 18, 2021 Douglas Karr
InsideSales.com's PowerSuite ™ waa hoggaanka maareynta jawaab celinta Taasi waxay siisaa kooxaha iibka wax kasta oo ay u baahan yihiin si ay u hagaajiyaan habka iibka fog oo ay u geliyaan iibka overdrive. Waxyaabaha softiweerka ah ee InsideSales.com waxaa loogu talagalay ka jawaab celinta hoggaanka iyo weydiimaha si dhakhso leh oo dhammaystiran. Tani waxay awood u siineysaa macaamiisha inay si baaxad leh u kordhiyaan qiimaha xiriirkooda iyo u qalmiddooda, iyo iibka iibka.
Alaabooyinka loogu talagalay Salesforce CRM
PowerDialer ™ ee iibka - Wicitaanka ugu awoodda badan suuqa oo si gaar ah loo dhisay si loogu maamulo Salesforce CRM. Wuxuu ubaahan yahay Salesforce CRM.
Guji-si-Wicitaan ™ ee Salesforce - Guji-u-yeer ™ ee Istaraatiijiyada waxay keentaa cilmi-baaris heer sare ah iyo tiknoolajiyadda barxadda InsideSales.com ee Salesforce CRM.
LocalPresence ™ ee Iibka - Shabakadda kaliya ee qaran ee loogu talagalay iibinta iyo kooxaha suuqgeynta inay si wax ku ool ah wax ugu iibiyaan ugana suuq gareeyaan gudaha taleefan, web iyo emayl.
PowerStandings ™ ee Iibka - PowerStandings ™ waxay u keentaa PowerDialer element shey xiisa badan oo xiiso leh Salesforce, waxayna si weyn kor ugu qaadaa waxqabadka celceliska.
PowerText ™ ee Iibka - PowerText ™ waxay bixisaa xusuusinno ballanta, farriinta hal guji ah, raad-raaca, iyo ka-warbixinta xiriirada taleefanka gacanta oo dhan dhammaan hoggaanka SaaS CRM, salesforce.com
Alaabta loogu talagalay InsideSales.com
Marti qaadka Maareynta Maareynta Lead - Barmaamijka maareynta hogaaminta iibka ee baahida loo qabo oo ay ku jiraan dhammaan aaladaha jawaabta hoggaanka aad u baahan tahay inaad la xiriirto, u-qalanto, oo aad xirto iibsiyo badan
PowerDialer ™ – Dialer-ka ugu awoodda badan suuqa. Loogu talagalay B2B iyo iibinta B2C adag. PowerDialer™ kaliya ma wanaajiyo wakhtiga wacitaanka, waxa ay wanaajisaa natiijooyinka.
PowerInbound ™ - Dhammaan qalabka taleefanka ee PowerInbound for oo loogu talagalay xarunta wicitaanka ee martigelinta martigelinta. Wuxuu kudhex jiraa PowerDialer ™ isku darka gudaha iyo dibada.
LocalPresence ™ by InsideSales.com - Si buuxda loogu dhex daray PowerDialer ™, LocalPresence ™ waxay siisaa shirkadaha joogitaan ganacsi oo maxalli ah in ka badan 280 suuq oo ku yaal Mareykanka.
Loop Jawaab leh ELF ™ -Nidaamka Loop-ka-jawaab-celintayadu waxay isticmaashaa "Ciidanka Shaqaalaha Korantada ™" ee ku dhex jira kobcinta hogaanka iyo maaraynta socodka shaqada. Wuxuu diraa iimaylo, fakis, jihooyin toos ah, kiciya wicitaan telefoon, iyo in ka badan.
Duubista iyo Kormeerka - Duub oo / ama kormeer wicitaan kasta. Wanaagsan tahay tababbarka tababarka iyo hubinta tayada.
JabberDog ™ - Wicitaan toos ah oo loogu talagalay baahinta farriinta codka oo leh xulashooyin si otomaatig ah emayl ama marin loogu diro wakiil toos ah.
Tags: furahagudaha iibkagudaha.comhagaajinta barbaarintadegaankawaciyaha awooddakoronto yaqaankormeerka iibkaduubista iibkajawaabta iibkaiibiniibiyaha xoogga crmmaaraynta socodka socodka shaqada
20 Istaraatijiyadaha Ecommerce ee Kordhinta Iibka Fasaxyada